Dhaqtarka: Sweden waxay ku jirtaa "khatar" haddii aan la qaadin tallaabooyin adag oo looga hortago Corona Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaDhaqtarka: Sweden waxay ku jirtaa “khatar” haddii aan la qaadin tallaabooyin adag oo looga hortago Corona
Dhaqtarka: Sweden waxay ku jirtaa “khatar” haddii aan la qaadin tallaabooyin adag oo looga hortago Corona
February 28, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Bjorn Olsen, oo ah dhakhtarka sare iyo borofisar cudurada faafa ee jaamacada Uppsala University, wuxuu tixgeliyey inay jirto khatar weyn oo sweden ku wajahan, haddii Swedhishku ay u sii wadaan inay u dhaqmaan sida ay maanta u dhaqmaan tusaale u hogaansanaanta marada wajiga.
wareysi uu siiyay idaacada Sweden ayuu ku jira subaxnimadii Maanta, Viruska Cusub ee sida dhaqsaha u faafaya Waxaa lagu joojin karaa qaadisata talaabooyin adag”
Iswiidhan waa inay “cagaheeda ku istaagtaa” oo ay diyaar u ahaataa inay si dhaqso leh u qaaddo tallaabooyinka saxda ah, ayuu raaciyay.
Olsen ayaa ugu yeedhay, waxyaabo ay ka mid yihiin, hababka ugu fiican ee raadraaca cudurka.
Isbeddelladan ayaa si qoto dheer u dhib badan, ayuu yidhi. (…) Sida kaliya ee lagu joojin karo isbedelada waa in la joojiyo faafitaanka cudurka.
Wuxuuna carrabka ku adkeeyay, in mustaqbalka fog, uu wali rumaysan yahay in tallaalku “guuleysan doono”.
Kama uusan saarin sii wadida isticmaalka wajiga ilaa Corona kadib.